အုပ်ချုပ်သူများဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Werner Herzog အားဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သောရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအသင်းအမေရိကန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအသင်းမှအုပ်ချုပ်သူများဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Werner Herzog အားဂုဏ်ပြုရန်
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအသင်းမှအုပ်ချုပ်သူများဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Werner Herzog အားဂုဏ်ပြုရန်
အဆိုပါ ရိုက်ကူးရေး၏ American Society (ASC) သည်၎င်း၏ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်အုပ်ချုပ်သူများဘုတ်အဖွဲ့ကိုOscar®နှင့်Emmy® Award nominee Werner Herzog တို့အားပေးအပ်လိမ့်မည်။ ၃၄ မှာအခွန်ဆက်ရမယ်th ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုအတွက်နှစ်ပတ်လည် ASC ဆုများ ဟောလိဝုဒ် & Highland ၏ Ray Dolby Ballroom ။
ASC ၏အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှဆုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းမှရပ်တန့်သူများကိုပေးအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအားဆုမပေးသည့်တစ်ခုတည်းသော ASC ဆုဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူများနှင့်အမြင်အာရုံအနုပညာပုံစံအတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။
"Werner Herzog ဟာတကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းပြောပြသူတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့သူကသူ့ရုပ်ရှင်ကိုသူများပြားလှတဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်" ဟု ASC ဥက္ကPresident္ဌ Kees van Oostrum ကပြောကြားခဲ့သည်။
Herzog သည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ခုနစ်ခုအတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆုများနှင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းများရရှိခဲ့ပြီး၊ ဇာတ်ကားနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၇၀ ကျော်ကိုထုတ်လုပ်၊ သူသည်သူ၏မှတ်တမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက်အော်စကာဆုရခဲ့သည် ကမ္ဘာ၏အဆုံးမှာကြုံတွေ့ (2009) နှင့် Little Dieter ပျံသန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ထူးချွန်သောထူးခြားသောထူးခြားသည့်အထူး (၁၉၉၇) တွင်အမ်မီအမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည်။ သူ၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့်စာရင်းသည်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ (ဗင်းနစ်၊ ဆန့်စ်တန်၊ ကိန်း၊ ဘာလင်နဲလ်စသဖြင့်) နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Herzog သည်စစ်ပြီးခေတ်အနောက်ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို Rainer Werner Fassbinder နှင့် Volker Schlöndorffတို့နှင့်အတူ ဦး ဆောင်သည်။ The ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ'' ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည်အနုပညာရုပ်ရှင်ကားများနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များအပေါ်တွင်တူညီသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ Aguirre, ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသ; Auch Zwerge သည်တစ်မျိုးတည်းသောမြေကြီးဖြစ်သည် (ထောင်ပြီးတောင်မှအသေးစားစတင်ခဲ့သည်); Fata Morgana; Glocken aus der Tiefe (နက်ရှိုင်းသောခေါင်းလောင်း); Grizzly လူသား၊ မေ့လျော့သောအိပ်မက်များဂူ၊ Glass ၏နှလုံး; ည၏ Nosferatu Phantom; Fitzcarraldo; သင်ခန်းစာအမှောင်; မရှုံးနိုင်သော; Kaspar Hauser နှင့် Stroszek တို့၏နက်နဲသောအရာ၊ အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့၎င်း၊ မိသားစုအချစ်ဇာတ်လမ်း၊ နှင့် ဂေါ်ဘာချော့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အခြားသူများအကြား။ သူ၏အမေရိကန်မှထုတ်လုပ်သောရုပ်ရှင်များတွင် - မကောင်းတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး - ခေါ်ရန် New Orleans ၏ဆိပ်ကမ်း; သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ; နှင့် သဲကန္တာရဘုရင်မ.
Herzog ၏ရုပ်ရှင်များကိုထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီးထူးခြားသောထူးခြားဆန်းပြားသောအရည်အသွေးဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ သူသည်ခေတ်မီဆုံးခေတ်ပြိုင်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အဖြစ်ချီးကျူးခံရသည်။ သူ၏မတည်ငြိမ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တောက်ပသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်သောသရုပ်ဆောင် Klaus Kinski နှင့်ယောက်ျားနှစ် ဦး စလုံးမှအကောင်းဆုံးအလုပ်အချို့ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသူတို့ပူးပေါင်းခဲ့သောရုပ်ရှင်များတွင်လူသိများသည်။ Herzog သည်အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားနှင့်သူတို့၏ပူးပေါင်းမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံး Fiend။ ထို့အပြင် Herzog သည်ရံဖန်ရံခါသူကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်သည် Julien မြည်းကလေးဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားလုပ်ဆောင်သောရုပ်ရှင်တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည် ဂျက် Reacher, နှင့်မကြာသေးမီကဒစ္စနေး + အတွက်အဆိုပါလိုင်း hit အဖြစ် အဆိုပါ Mandalorian.
ယခင် ASC ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်အုပ်ချုပ်သူများဆုကို Jeff Bridges၊ Angelina Jolie၊ Denzel Washington၊ Ridley Scott၊ Barbra Streisand၊ Harrison Ford၊ Julia Roberts၊ Christopher Nolan၊ Morgan Freeman၊ Francis Ford Coppola၊ စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်။
ရုပ်ရှင်ရုံတွင်ထူးချွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက် ၃၄ ကြိမ်မြောက် ASC ဆုပေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ www.theasc.com သို့မဟုတ် 323-969-4333 ခေါ်ဆိုပါ။
Lena Herzog ၏ဓာတ်ပုံ
ASC ASC ဆုပေးပွဲ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor တီဗီနည်းပညာ ပန်ကြားလွှာ	2020-01-09
ယခင်: CLEAR-COM သည်အမေရိကန်တွင်အငှားယာဉ်စီးပွါးရေးဇုန်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။